Indlu yokuthengisa yaseCanada, indlu yezitena ejikelezwe yimithi eluhlaza, igumbi lokuhlala elikhulu, indawo yomlilo, igadi enkulu, iBBQ
Indlu ekumhlaba osikelwe izindlu yonke sinombuki zindwendwe onguKentaro
Kwihlathi elijikelezwe buhlaza, indlu yaseCanada eyenziwe ngezitena ibonakala. Relax kwigumbi lokuhlala elibanzi kunye negumbi lokutyela, i-barbecue kwindawo enkulu, phumla kwindawo yomlilo, okanye uphumle nosapho lwakho. ICanadian Trad House yindlu eyenziwe ngamaplanga, izitena kunye noyilo olusuka eCanada. Ingaphakathi iseyimvelaphi. Nceda ujabulele ubomi obungaqhelekanga kwihlathi laseNasu.
Nceda ube namava ebarbecue kwigadi enkulu. Nceda uyisebenzise kwimiboniso eyahlukeneyo efana nohambo losapho, ukudlala nabahlobo kunye nezibini, uqeqesho lwenkampani kunye nezixhobo zokuzonwabisa, iklabhu kunye nemisebenzi yeklabhu, kunye namava obomi belizwe kwindawo ezolileyo.
<< Ukufikelela >> Yehla kwisiPhambuka saseNasu kwaye wehle ngemizuzu eli-10.
"Popular amabala ebumelwaneni indawo" (Ixesha efunekayo ngemoto) Nasu Highland Park (imizuzu engama-20) Minamigaoka Ranch (imizuzu engama-20) Nasu Kogen (imizuzu eli-15) Nasu Safari Park (imizuzu 17) Nasu Finland Forest (imizuzu 19) Nasu Rindo Lake Lake View (imizuzu eyi-15) iNasu Heisei noMori (imizuzu engama-25) iNasu Animal Kingdom (imizuzu eyi-20) iNasu Onsen Family Ski Resort (imizuzu eyi-25) njl.
Sineshampu, iconditioner, isepha yomzimba kunye nesomisi seenwele.
iibhedi ezilala umntu omnye eziyi-3, Iimatrasi ezibekwa phantsi eziyi-2
Umbuki zindwendwe ngu- Kentaro
Inombolo yomthetho: M090029683